Faritra Boeny: ampidinina ny vidim-bary araka ny lalanam-barotra | Région Boeny
Taorian’ny fandalovan’ny Filoham-pirenena teto Mahajanga dia nanome baiko ny Ministeran’ny varotra sy fanjifana mba hampidina ny vidim-bary hafarina ho 1 400 ariary na 1 450 ariary fa tsy 2 200 ariary na 2 300 ariary arakan’ny lalanam-barotra.
Ny tena olana dia ny fararaotana ataon’ireo mpaninjara eny amin’ny tsena mikasika ny fanalalahana ny varotra ka mampiakatra vidim-bary tsy ara-drariny hoy Ministry ny varotra sy ny fanjifana, Atoa Tazafy Armand
Nanangana kaomity mpanaramaso ny vindim-bary izy ireo mba hitety ny tsenan’ireo mpaninjara eto Mahajanga hijery izay mpaninjara sahy mbola hampiakatra ny vidim-bary sy hanatanteraka ny fizohina ny vary nafarina.
Izany dia ahitana ny Prefet an’i Mahajanga, ny Faritra Boeny, ny foibem-paritry ny hetra, ny foibem-paritry ny varotra sy ny fanjifana, ny Polisim-pirenena ary ny Zandariamariam-pirenena.
Tamin’ny 25, 26, 27 febroary 2017 dia nanatanteraka valandresaka tamin’ireo mpanafatra vary avy mikasika ny paikady fampiharana ny fampididinana ny vidim-bary aty amin’ny faritra Boeny ny Ministeran’ny varotra sy fanjifana sy ny Prefet an’i Mahajanga ary ny Faritra Boeny.
Araka nambaran’ny Ministry ny varotra sy ny fanjifana dia mbola andrasana ihany koa ny didim-panjakana izay tinapakin’ny filankevitry ny Minista amin’ny 01 Martsa 2017 mba afahana mandray fepetra feno ho an’ireo mpandika ny lalanam-barotra amin’izany.